Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » I-Port Royal kuhlelo olusha lwe-Cruise ye-Montego Bay
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ungqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, uveze ukuthi iTUI, okuyinkampani enkulu yezokuvakasha emhlabeni, ingeze iPort Royal ohlelweni lwabo lukaJanuwari 2022. Uveze ukuthi inkampani ikuqinisekisile ukuqala kabusha kwezindiza zabo nezikebhe zabo eziya eJamaica, ngemisebenzi yolwandle ehlelelwe ukuqala ngoJanuwari. Le nkampani iveze ngqo ngezinhlelo zokuthunyelwa ekhaya eMontego Bay, kanye nokufakwa kwamakholi ePort Royal ohlelweni lwabo lokuhamba ngomkhumbi.
I-TUI, engomunye wabasebenza kakhulu kwezokuvakasha eJamaica nozakwethu esigabeni sokusatshalaliswa kwemboni yezokuvakasha, iqinisekisile imisebenzi yokuhanjiswa kwemikhumbi olwandle eMontego Bay.
Abaphathi benkampani abavela ku-TUI beluleke ukuthi imininingwane yabo ikhombisa ukuthi isidingo sokuya eJamaica siphezulu.
Umthamo womoya walesi sikhathi sasebusika uzoba ngama-79,000, okuyi-9% kuphela engaphansi kwezibalo zasebusika zangaphambi kwe-COVID.
Lesi simemezelo senziwe eDubai muva nje, ngesikhathi somhlangano obandakanya uNgqongqoshe uBartlett, uMqondisi Wezokuvakasha uDonovan White, kanye nabaphathi beqembu le-TUI: UDavid Burling - oyi-CEO Markets and Airlines, kanye no-Antonia Bouka - Group Head Government Relations & Public Policy-Destinations.
“Namuhla i-TUI, engomunye wabahwebi bethu abakhulu kunabo bonke futhi esibambisene nabo esigabeni sokusatshalaliswa kwemboni yezokuvakasha, iqinisekisile imisebenzi yezokuvakasha yasekhaya ngomkhumbi eMontego Bay. Okubaluleke kakhulu ukuvakashelwa okuningana okuhleliwe nezingcingo ePort Royal Cruise Port, eziqala ngoJanuwari. Silindele ukuthi sibe nezingcingo ezinhlanu kusukela ngoJanuwari kuya ku-Ephreli 2022 ePort Royal, ”kusho uBartlett.
Ngesikhathi kuxoxwa ne-TUI, abaphathi benkampani beluleke ukuthi imininingwane yabo ikhombisa ukuthi isidingo sokuhamba ngomkhumbi siphezulu futhi bakwazile nokugcina ukubhuka okukhanseliwe. Baphinde babelana ngokuthi umthamo womoya wale sizini yobusika uzoba ngama-79,000, okuyi-9% kuphela engaphansi kwezibalo zasebusika zangaphambi kwe-COVID.
UBartlett uqinisekise abaphathi be-TUI ukuthi Jamaica ihlala iyindawo ephephile enezimo eziphansi kakhulu zokudluliswa kwe-COVID-19 ngaphakathi kwamaphaseji aqinile, kanye nomkhankaso wokugoma abasebenzi bokuqina.
“Umkhankaso wethu wokugoma abasebenzi ubusebenza ngempumelelo enkulu eJamaica, iningi labasebenzi bethu likhethe ukugoma ngokuphelele. Siyethemba ukuthi kungekudala sizobe sigubha u-30-40% wabasebenzi bezokuvakasha baseJamaica abagonyiwe kanye nokwenyuka okukhulu ekugomeni kwabantu bethu bonke ngoJanuwari, ”kusho uBartlett.
UNgqongqoshe uBartlett uqaphele ukuthi yena nethimba lakhe, baphinde baba nezingxoxo nabanye abalingani abalulekile eDubai maqondana nezinhlelo zokutshala imali kumkhiqizo wezokuvakasha ePort Royal.
“Ngibe nezinye izingxoxo ezibalulekile maqondana nePort Royal, engabona umsebenzi omningi ozokwenzeka kulo nyaka osele. Ngisanda kuphetha izingxoxo ezithile ne-DP World, okungaba nomphumela wentuthuko enkulu ezimotweni zaseYurophu ezingena eCaribbean, ikakhulukazi eJamaica, lapho iPort Royal iyindawo ebucayi, ”kusho uBartlett.
“Ngijabule ngezingxoxo zethu kuze kube manje lapha eDubai futhi ngikulindele lokho IJamaica izobona ezinye izimali ezibalulekile kusuka kulezi zingxoxo lapha, ”engeza.
I-DP World iyinkampani ye-Emirati yamazwe omhlaba esezinze eDubai. Le nhlangano igxile kakhulu ekuphathweni kwempahla, ezinsizakalweni zasolwandle, ezindaweni ezigcina amachweba nasezindaweni zokuhweba zamahhala. Yakhiwa e2005 kulandela ukuhlangana kweDubai Ports Authority neDubai Ports International. I-DP World iphatha iziqukathi ezingaba yizigidi ezingama-70 ezilethwa yimikhumbi ezungeze i-70,000 minyaka yonke, okulingana cishe ne-10% lomgwaqo wamakhonteyna womhlaba wonke obalwa ngamatheminali abo asolwandle nangaphakathi kwezwe angama-82 akhona emazweni angaphezu kwama-40. Kuze kube ngu-2016, i-DP World ibisebenza kakhulu emachwebeni omhlaba, futhi kusukela lapho ithole ezinye izinkampani phezulu naphansi kuhla lwamanani.